Kedu ihe kpatara ị drinkụ apụl cider mmanya na mmanụ a honeyụ maka ịdị arọ | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Ka a na-akpọ mmanya mmanya, mgbe a kpọrọ ya ị drinkụ oke ọnwụ apụl cider mmanya tinyere mmanụ a honeyụ, ọtụtụ na-enwe obi abụọ.
Anyị ga-anwa ịchụpụ obi abụọ gị ma kọwaa ihe kpatara ezigbo mmanya ọ kwadebere ji arụ ọrụ ọfụma, na-enyere ọ bụghị naanị chara acha, kamakwa ịgwọ ahụ.
Ibelata oke mmanụ na mmanụ a appleụ na-ata, ebee ka acid nke anụ ahụ na-eme
Ibu ibu na ọrịa dị iche iche na-ebilite n'ihi nrụgide acid-base na-emetụta ahụ. N'ime ọtụtụ afọ, ọ na-abawanye n’iba ụba acidity.
Ihe kpatara ya bụ n'ihi na anyị anaghị eri nri nke ọma. N’ihi ya, ọbara na-ebelata, nsí na toxins na-agbakọ, ihe na-alụso ọrịa ọgụ, na metabolism na-ebelata. Na gburugburu acidic nke ahụ gị bụ kọlestrọl dị elu mgbe niile.
Nke nta nke nta, mmadụ na-arịa ọrịa na-adịghị ala ala, ibu na-abawanye, ma n'otu oge ahụ, ike na-ebelata ma ịda mba na-apụta.
Iji gbochie nke a, ị ga-erikwu nri alkaline, drinkụọ mmiri dị ọcha karị, sachapụ ahụ gị mgbe niile, ma na-emega ahụ.
Abamuru nke apụl cider mmanya na mmanụ a honeyụ maka oke belata ọ bụghị naanị
Apple cider mmanya ya na mmanụ a honeyụ - ihe ọ drinkụ thatụ nke, megide ndabere nke nri kwesịrị ekwesị, jiri nke nta nke nta mee ka pH nke eriri afọ na ọbara nwee ike. Ihe ọ drinkụ drinkụ na-agbanwe acidity, na-eme ka gburugburu ghara ịrịa ọrịa.
N'ihi ya, mgbaze na metabolism na-adị mma, ịlụso ọrịa ọgụ na-esikwa ike ma ahụike ka mma.
Apple cider mmanya na mmanụ a honeyụ - a gwara ya ka ọ were ya n'ụtụtụ, ọ ga - aghọ ememe mmachi, dị ka iko mmiri na afọ efu.
Usoro a bara uru ọ bụghị naanị maka ịtalata oke, kamakwa maka ọrịa na ọrịa.
ọbara mgbali elu na nsogbu ọbara mgbali elu;
ọrịa ogbu na nkwonkwo na ọrịa ogbu na nkwonkwo;
ahụ ọkụ na ahụ ọkụ;
oke cholesterol ojoo.
Etu esi esi mmanụ a honeyụ mee cider mmanya na mmanụ a honeyụ wee buru maka ịdị arọ ya
Kwa ụtụtụ ị na-awụnye iko mmanya ọ inụ inụ nke ị na-akpali 1 tbsp. a spoonful nke apụl cider mmanya na 1 tbsp. ngaji mmanụ a .ụ. Ngwaahịa abụọ ga-adịrịrịrị oke na nke okike.
Kwesịrị, ịkwesịrị ịkwadobe apụl apple cider mmanya maka oke belata n’onweghị. Nke a bụ uzommeputa dị mfe maka gị.
obere apụl - 4 pcs;
shuga ájá - 4 tsp;
mmiri a gbanwere.
Etu esi eme mmanya na-egbu egbu - Ntụziaka
1. Sichaa mkpụrụ osisi ahụ ma jighee ya.
2. Ekem bee apụl n'ime obere Mpekere.
3. Wụsaa ha n'ime ite iko na - enweghị ntụ ma ọ bụ otu lita na ọkara.
4. Tụọ otu iko mmiri ma gbanye shuga dum n’ime ya.
5. Nyefee na nnukwu efere na apụl ma tinyekwuo mmiri ka e wee kpuchie Mpekere ahụ kpamkpam.
6. Kechie ite ahụ na fauze ma ọ bụ akpụkpọ anụ, bandeeji.
7. Chekwaa maka gbaa ụka maka ụbọchị 14-20 na ebe a na-ekpo ọkụ.
8. Mgbe oge nchacha ahụ gafere, kpọnye mmiri acidic n’ime ihe a na-etinye n’ime karama nwere ite na-ejide ya, gbanye ya.
9. Tinye mmanya ahụ n'ime ọkụ, ugbua na-enweghị iberi apụl. Jidere maka izu anọ ọzọ, na-awụpụ ihe ọ theụ theụ ahụ oge ụfọdụ ma ọ bụ jiri mkpịsị dị ọcha na-akpali.
Ugbu a, ịnwere ike ịnwale mmanya cider apụl mebere eme, ma ọ bụrụ na acid ya dabara gị mma, malite ịmalite iji ebumnuche nke ịbelata na ịgwọ ọrịa.
Contraindications maka ifelata na afụ ọnụ apụl
Dịka usọbọ ọ bụla, apụl cider mmanya nwere mmanụ a hasụ nwere contraindications. Iji mee ka ahụ gị ghara imerụ ahụ gị ọzọ, tupu ị aụ mmanya, ịkwesịrị nyocha nke kacha nta ma nweta ndụmọdụ dọkịta.
Yabụ, a machibidoro ị drinkụ mmanya cider mmanya na mmanụ a honeyụ maka ọnya afọ na gastritis, maka enterocolitis, ịba ọcha n'anya, pancreatitis, ike ọgwụgwụ, n'oge ime, n'oge nwata na oge uto.
Ọ bụrụ na mgbe mmalite nke ị drinkụ mmanya ahụ enwere mmetụta na-adịghị mma na eriri afọ, mgbe ahụ ị kwesịrị ịbelata akụkụ nke ọgwụ ahụ ma jụ iji ya na afọ efu. Ọ bụrụ na mgbaàmà na-adịghị mma agaghị apụ, ị kwesịrị ịhapụ ọgwụgwọ ahụ, nke pụtara na ọ gaghị adabara gị.
Ajuju 22 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,352.